ညတစ်ရေးနိုး ရေသောက်တာက ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေသလား - Hello Sayarwon
ညတစ်ရေးနိုး ရေသောက်တာက ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေသလား........
ညဦးကတော့ အိပ်ရင်း ဆီးသွားချင်မှာ စိုးလို့ ရေသိပ်မသောက်ဘဲ အိပ်လိုက်တယ်။ ညတစ်ရေးနိုး လာတော့ အာခေါင်တွေက ခြောက်ပြီး ရေတအား ငတ်လာလို့ ရေတွေ တဝ သောက်လိုက်မိတယ်။ ရေသောက်လိုက်မှပဲ ကောင်းကောင်း အိပ်ပျော်သွားတော့တယ်။
ဒီလိုမျိုး တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ် လုပ်မိစဉ်က ဘာရယ်လို့ မတွေးမိပေမယ့် ရက်တွေ ဆက်တိုက်လို ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ ခေါင်းထဲမှာ တွေးမိလာတာက ဒီလိုမျိုး ညတစ်ရေးနိုး ရေသောက်တာက ကောင်းရဲ့လား။
ကျောက်ကပ်တွေ ဘာတွေများ ထိခိုက်မလား။ အခြားရော ဘယ်လိုတွေ ထိခိုက်နိုင်သေးလဲဆိုပြီး စိတ်ပူနေတဲ့သူလေးတွေများ ရှိလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးလေးက သင့်အတွက်ပါ။
ညတစ်ရေးနိုး ရေသောက်တာက ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေသလား……..
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေဖို့အတွက် နေ့စဉ် ရေကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ သောက်ဖို့ လိုပါမယ်။ တစ်နေ့လုံးရော အိပ်စက်နေစဉ်မှာပါ အသက်ရှူတာ၊ ချွေးထွက်တာ၊ အစာခြေစနစ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့် ရေကို ဆုံးရှုံးနေရသလို ဆီးသွားတာ၊ ဝမ်းသွားတာတွေကြောင့်လည်း ရေကို ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။
အချို့တွေက အိပ်ချိန်အတွင်း ဆုံးရှုံးသွားမယ့်ရေတွေကို ကြိုတင် ဖြည့်တင်းတဲ့ အနေနဲ့ မအိပ်ခင်မှာ ရေတစ်ခွက် သောက်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို သောက်လိုက်တဲ့အခါ ညလယ်မှာ ဆီးထသွားတာမျိုး ရှိပေမယ့် ရေတအားငတ်လို့ တရေးနိုးလာတယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ ဖြစ်ခဲပါတယ်။
ရေဆာတယ်။ ရေငတ်တယ်ဆိုတာက ခန္ဓာကိုယ်က ရေဓာတ် ဆုံးရှုံးနေပြီဆိုတာကို ဖော်ပြတဲ့ လက္ခဏာ တစ်ရပ်ပါ။ ဒါကြောင့် တစ်ရေးနိုး ရေဆာလာတဲ့အခါ ရေကို သောက်လိုက်ပါလို့ အကြံပြုပါရစေ။
ရေဆာချိန်မှာ ရေသောက်လိုက်တာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ရေဓာတ်တွေကို ဖြည့်တင်းပေးလိုက်တာပါ။
တစ်ရေးနိုး ရေသောက်သင့်ရဲ့လား ……..
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ အကြောင်းလေးကို ဆက်ရရင် ရေဆာချိန်မှာ ရေသောက်လိုက်တာ ကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ရေးနိုးတိုင်း ရေဆာလို့ ရေသောက်တာက ကျန်းမာရေးကိုများ ထိခိုက်စေနိုင်သလားဆိုတော့ မထိခိုက်စေနိုင်ပါဘူး။
တကယ်ကတော့ ညအိပ်ရာ မဝင်ခင်မှာ ရေဖန်ခွက် တစ်ခွက်စာ သောက်လိုက်တာက အစာခြေစနစ်ကို ကျန်းမာစေသလို ၇ နာရီ ကနေ ၈ နာရီလောက် ကြာတဲ့ အိပ်ချိန်အတွင်းမှာ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေဓာတ် ပြတ်လပ်တာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ ထောက်ကူပေးပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အိပ်ခါနီး ရေသောက်တာက လူတိုင်းလိုလို လုပ်မိမယ့် အမူအကျင့် တစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အချို့တွေက မအိပ်ခင် ရေတစ်ခွက် သောက်ရတာကို ကြိုက်ပေမယ့် ညအိပ်ရင်း ဆီးခဏခဏ ထသွားရမှာ စိုးလို့ မကြိုက်တဲ့သူတွေလည်း အများအပြားပါ။
ဒီလိုနဲ့ ညအိပ်ခါနီး ရေမသောက်တဲ့အခါ အိပ်နေစဉ်မှာ ရေဓာတ် လိုအပ်မှုကြောင့် ရေတွေဆာရင်း တစ်ရေးနိုး၊ နှစ်ရေးနိုးတွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဒီလိုနိုးလာတဲ့အခါ ရေကလည်းဆာ မသောက်ရင်လည်း အိပ်မပျော်တာကြောင့် သောက်ရင်း ကျန်းမာရေများ ထိခိုက်မလား စိတ်ပူနေတယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်မပူဘဲ ရေဆာပြေအောင် သောက်လိုက်ပါနော်။
ညလယ်မှာ ရေဆာတာကို ရေသောက်တာကြောင့် ကျန်းမာရေးကို မထိခိုက်စေနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သတိထားရမှာ တစ်ချက်က ရေအရမ်းဆာပြီး တစ်ရေးနိုးလာတဲ့အခါ ရေကို တစ်ခွက်ထပ် ပိုပြီး မသောက်ဖို့ပါ။
တစ်ရေးနိုးလို့ ရေတစ်ခွက်သောက်လိုက်တာက ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက ကျောက်ကပ် အပါအဝင် အခြား အစိတ်အပိုင်းတွေကို မထိခိုက်စေသလို အစာခြေစနစ်ကို ကျန်းမာစေပြီး အိပ်ရာနိုးတဲ့အခါ ဝမ်းပျော့ပျော့ သွားစေဖို့တောင် ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။
ကဲ…… တစ်ရေးနိုးမှာ ရေဆာပြီး နိုးလာရင် ရေတစ်ခွက်သောက်ပြီး ပြန်အိပ်လိုက်ပါ။ ကျန်းမာရေးကိုလည်း မထိခိုက်စေပါဘူးနော်။
Is drinking water at night bad for kidneys? https://www.quora.com/Is-drinking-water-at-night-bad-for-kidneys Accessed Date 23 September 2021
How Good Is Drinking Water Before Bed For You? https://www.sleepadvisor.org/drinking-water-before-bed/ Accessed Date 23 September 2021